Big Springs Hot Springs - Ambioka tsara indrindra ao amin'ny morontsiraka
Hot Springs ao Big Sur
Toerana onenana any Big Sur
Ny ankamaroan'ny mpitsidika any amin'ny morontsirak'i Big Sur any Californie dia mijery ny toerana misy azy, fa tsy fisian'ity ranomasina midadasika ity no hany tokana azon'ny mpitsidika ao. Ao Big Sur, loharano mafana voajanahary no manome toerana tsara indrindra hialana sasatra.
Any Big Sur dia afaka manidina amin'ny lohataona avy any an-tendrombohitra ianao, mangatsiatsiaka ao amin'ny dobo voajanahary miandrona ny Oseana Pasifika, na mankafy trano fandroana mafana any Japon amin'ny toeram-pitsaboana Zen.
Ny iray amin'izy ireo dia toerana tsara indrindra hialana amin'ny fotoana mahafinaritra rehefa mitsidika Big Sur ianao. Ary tokana izy ireo ka afaka mahagaga ny namanao rehetra amin'ny filazanao ny zavatra nataonao.
Araka ny voalazan'ny Monterey County Weekly , ireo no loharano mafana misokatra ho an'ny vahoaka ao amin'ny Monterey County. Azonao atao ny mamaky mikasika ny hafa, fa ny Paraiso Hot Springs akaikin'i Soledad dia mihidy ary mety tsy hiverina intsony. Ny ivon-toerana momba ny Geophysical National dia nanisy lisitra loharano mafana ao amoron-dranomasina, saingy nalefa any amin'ny faritra iray ambanivohitry ny fivarotana fananganana trano.
Hot Springs ao amin'ny Tassajara Zen Center
Ny Center Zen Tassajara dia monastera bodista any an-tendrombohitra any Big Sur. Nandritra ny "Season sehatra" izy ireo nanomboka tamin'ny May ka hatramin'ny tapatapaky ny volana Septambra, dia manokatra ny trano ho an'ny mpitsidika. Tafiditra ao anatin'izany ny fandroana fandroana japoney izay azonao atao mandritra ny fitsidihana andro iray.
Mila mitondra tànana ianao. Azonao atao ny misakafo maraina na mividy sakafo ao amin'ny efitra fisakafoany.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny tranokalan'i Tassajara, fa mila miantso 831-659-2229 ianao mba hamandrihana, tsy mihoatra ny roa herinandro mialoha.
Hot Springs ao amin'ny Anjerimanontolon'i Esalen
Ny Ivotoerana Esalen dia nanondraka fantson-drano tamin'ny fananany, izay miorina eo an-tampon'ny hantsana ambonin'ny ranomasimbe. Toerana tsara tarehy mahatalanjona eo ambonin'ny Oseana Pasifika.
Raha tsy mipetraka ao Esalen ianao, dia tsy maintsy mijanona tara vao hankafy ny loharano. Eslaen dia toeram-pitsaboana sy fianarana, ary ny loharano mafana dia tsy fampiasana tsotra fotsiny, ary tsy fitadiavam-bahoaka izany. Amin'ny ankapobeny, ny loharano mafana dia misokatra amin'ny olona mijanona ao. Raha te hiditra ao ianao dia afaka mitsidika ny besinimaro amin'ny alàlan'ny famandrihana amin'ny 1:00 hatramin'ny 3:00 maraina. Tamin'ny faramparan'ny taona 2017, ny batisan'ny alatsinainy dia tsy natolotra tao Esalen fotoana fohy. Azonao atao ny manamarina ny toerana misy azy ao amin'ny tranokalan'ny Esalen.
Ny loharano Esalen dia manana ambaratonga roa misy toeram-pialan-tsasatra sy andaniny roa, ny "mangina" ary ny "mangina". Ny dobo dia ao an-trano sy eny ivelany, ary tsy azo atao ny akanjo. Azonao atao ny mahazo fanazavana bebe kokoa momba ny loharano mafana ao amin'ny tranonkalany.
Sykes Hot Springs no hany loharano mafana ao Big Sur. Indrisy fa nikatona izany taorian'ny Safodrano Soberanes tamin'ny taona 2017 ka nanimba ny lalana mankany. Azonao atao ny mahazo fanazavana momba ny Sykes Hot Springs ao VentanaWild.
Rehefa manokatra ny Sykes, dia hahita dobo roa voajanahary voajanahary ao ianao, eo amin'ny habetsahan'ny toeram-pisakafoanana kely kely izay afaka mihazona olona efatra. Ny antsasaky ny hafanana dia eo amin'ny 102 degrees saingy miovaova amin'ny vanim-potoana.
Tsy maintsy mandehandeha any ianao, eo amin'ny 10 kilaometatra amin'ny alàlan'ny Ventana Wilderness ao amin'ny Pine Ridge Trail.
Fangom-pivangongo mahery miaraka amin'ny tombontsoa ambony indrindra eo amin'ny 1000 metatra - ary be dia be sy ambany. Ilaina adiny efatra eo ho eo ny mandeha amin'ny ora iray. Midika izany fa tsy hikorontana ianao, hikapoka, ary handehandeha amin'ny andro iray ihany.
Ny olona sasany izay tao amin'ny Sykes Hot Springs dia nilaza fa fomba mahafinaritra hanalavana ny androm-pandringanana anao. Tena mahafinaritra be koa izany, miaraka amin'ny olona maro mipetraka manodidina azy amin'ny faran'ny herinandro be atao. Misy mpitsikera an-tserasera sasany mitaraina fa indraindray be atao izy io, miaraka amin'ny olona folo izay miezaka ny miditra anaty dobo kely.
Aza mijanona ela loatra ao anaty rano. Afaka mafana loatra ianao.
Raha manana toe-javatra mety hitera-doza ianao amin'ny fangirifiriana amin'ny rano mafana, miangavy dokotera alohan'ny handehananao.
Tsara ho an'ny rano ny rano, fa aza misotro.
Azonao atao ny mitondra rano mangatsiaka mba hosotroina. Ny dobo dia afaka mafana kely, ary manampy amin'ny fanaraha-maso ny vatanao izany.
Raha miala ny toetr'andro dia ento ny lamba fanamiana.
More Hot Springs ao Kalifornia
Raha tianao ny mitsoka loharano mafana voajanahary ary te-hahita bebe kokoa amin'izy ireo, jereo ny torolalana ho an'ny loharano mafana ao Californie .
Toby ao amin'ny Lohataona mena, Kalifornia
Fidirana amin'ny herinandro ho an'ny Mendocino
Fivoahana tsotra dimy tao amin'ny Valley Yosemite
Halaviran-dalambon'i Half Moon Bay
Aiza no handehanana Camping ao amin'ny Valley Silicon
Do's & Don'ts eto Myanmar
Heidelberg Reiseführer in Heidelberg
Tantara mampientam-po: Ireo Mahery fo amin'ny fiarovana ny Bibidia any Afrika
Fialofana ho an'ny biby fiompy sy vondrona famonjena ao Little Rock, Arkansas
Manao taxi ho any amin'ny seranam-piaramanidin'i Paris: vonona ve io?
The 8 Best Everglades Boat Tours mba hividy amin'ny 2018
Hotel Casa Azul, trano fialokalofana tsara tarehy ao Cuernavaca
Coney Island, New York: Ny Torolalana Manonona
Moa ve i Queens any avaratr'i New York na an-tanàna?
Makassar, zavatra lehibe indrindra ataon'ny Indoneziana sy ny mijery
LA Coupon Restaurant sy Discount Program